Ithegi: intengiso ye-facebook | Martech Zone
Ithegi: intengiso ye-facebook
I-Influ2: IQonga lokuThengisa eliSekwe kuMntu (i-ABM) kwiQonga leNtengiso
NgoLwesibini, Juni 1, 2021 NgoLwesibini, Juni 1, 2021 Douglas Karr
Iiakhawunti azenzi zigqibo, zenziwa ngabantu. Inkqubo ephumeleleyo yokuThengisa esekwe kwiAkhawunti (ABM) ilandela iiakhawunti kwinqanaba lesicwangciso kodwa iyathetha nabantu abakwinqanaba lokuphumeza. I-Influ2 ichaza oku njengenkqubo ye-ABM yesisombululo esiphakamileyo apho izinto eziphambili zibandakanya: Ukuqhuba kwiqela elithengayo. Yiya ngaphaya kokukhetha iiakhawunti ekujoliswe kuzo: uphando olwenziwa ngabenzi-zigqibo abathile ngamaqela okuthenga iiakhawunti zakho ojolise kuzo. Jonga inkcazo engapheliyo ye-ICP yakho ukudibanisa uluhlu lwabenza izigqibo
I-ActionIQ: IsiQendu seDatha yaBathengi abaLandelayo ukuze kulungelelaniswe abantu, iTekhnoloji, kunye neNkqubo
NgoLwesine, uJanuwari 14, 2021 NgoLwesine, uJanuwari 14, 2021 Douglas Karr
Ukuba uyinkampani yeshishini apho usasaze idatha kwiinkqubo ezininzi, iPlatifomu yeDatha yaBathengi (CDP) phantse iyimfuneko. Iinkqubo zihlala zenzelwe inkqubo yangaphakathi yequmrhu okanye i-automation… hayi amandla okujonga umsebenzi okanye idatha kuhambo lwabathengi. Ngaphambi kokuba amaQonga eeNkcukacha zaBaxumi afike kwimarike, izixhobo eziyimfuneko zokudibanisa amanye amaqonga athintele irekhodi elinye lenyaniso apho nawuphina umbutho angayibona imisebenzi ejikeleze
IJustControl.it: Ngokuzenzekelayo Ukuqokelelwa kweDatha yokuQokelelwa kweDatha kumajelo onke
NgoLwesithathu, Oktobha 7, 2020 NgoLwesithathu, Oktobha 7, 2020 UmRoma Sulla
Intengiso yedijithali iqhutywa yimfuno yokwenza ulwenziwo olukhulu: imithombo yolwazi emitsha, indibaniselwano entsha yentsebenziswano, amaxabiso asoloko etshintsha, iimeko eziphucukileyo ze-UA, njl. Njl. Kungenxa yoko le nto abaphumeleleyo nabafuna ukuba ziingcali befuna isidingo sokusebenza ukuze bakwazi ukujongana neemeko ezinzima kunye nemifanekiso entsonkothileyo. Nangona kunjalo, izixhobo ezininzi esele zikhona zinika indlela ephelelwe lixesha 'yobungakanani obulingeneyo konke'. Ngaphakathi kwesi sikhokelo sokuqala, zonke
I-Crello: Umhleli we-Graphics we-Pay-As-You-Go kunye namawaka amaTemplate amahle
NgoMvulo, Septemba 7, 2020 NgoLwesibini, Februwari 9, 2021 Douglas Karr
Singabalandeli abakhulu beDepositphotos, ifoto efikelelekayo yesitokhwe, umzobo kunye nesisombululo sevidiyo. Kungenxa yoko le nto sidwelisiwe njengomxhasi kwaye siqhubeka nokukhuthaza inkonzo yabo kwindawo yethu kunye nabaxumi bethu. Ewe kunjalo, nathi siyinxalenye. Iqela elisemva kweDepositphotos ngoku lisungule uCrello, umhleli womboniso wasimahla onikwe izigidi zeetemplate ezintle. Ukukhumbuza i-Canva (ngaphandle kwesidingo sokubhalisa), iCrello ibonelela ngaphezulu kwe-10,500 yemifanekiso yasimahla, kubandakanya neefoto,
SiteKick: Zenzekelayo i-White-Labeled Analytics Reporting yaBathengi bakho
NgoLwesihlanu, Septemba 4, 2020 NgoLwesihlanu, Septemba 4, 2020 Douglas Karr
Ukuba usebenzela abathengi abaninzi, ukwakha ingxelo esisiseko okanye ukudibanisa imithombo emininzi kwisisombululo sedashboard kunokuba nzima kakhulu. I-SiteKick inokusingatha yonke ingxelo yakho ephindaphindekayo ngeengxelo zeveki, zenyanga, kunye nekota. Ingxelo nganye ikwifomathi yokubonisa (i-PowerPoint) kwaye inokufakwa uphawu, ibhalwe emhlophe kwi-arhente yakho okanye kumxhasi, kwaye iziphumo zinokuhlelwa okanye ulwazi olongezelelekileyo olunikezwe ngaphambi kokuthumela kumthengi wakho. I-SiteKick ibonelela ngezi zibonelelo zilandelayo kwiNgxelo yeMithombo emininzi